Minisiteran’ny kolontsaina : Naneho ny alahelony sy ny sakana ireo solotenan’ny mpanakanto -
AccueilVaovao SamihafaMinisiteran’ny kolontsaina : Naneho ny alahelony sy ny sakana ireo solotenan’ny mpanakanto
Anisan’ireo minisitera faralahin’olona hatrany hatramin’izay. Taorian’ny fiovan’ny mpikambana ao anatin’ny governemanta, nihaona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny sendikan’ny mpanakanto eto Madagasikara ny minisitry ny kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, Johasy Eleonore. Nandritra izany, naneho ny alahelony sy ireo sakana amin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina ireo solotenan’ny mpanakanto. Saika hita tamin’io fihaonana io avokoa ny sehatra samihafa eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina toy ny mpikabary, ny mpihira, ny mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny kolontsaina… Anisan’ny goavana indrindra amin’ny fitarainan’ireto mpanakanto ireto ny tsy fisian’ny fitohizan’ny fitantanan-draharaha eo amin’ity minisiterana ity. Rehefa miova ny minisitra dia matetika mijanona avokoa ireo asa efa natao sy ireo tetikasa novolavolaina. « Tsy misy ny teti-bola ankapobeny amin’ny fampandrosoana ny kolontsaina », araka ny fanamarihana nentin’i Ndriana Ramamonjy avy amin’ny ofisy malagasy miaro
Ny zon’ny mpamorona na ny Omda.
Nivoitra tamin’ny fihaonana ihany koa no tsy fanomezana lanja ireo vakoka sy kolontsaina malagasy izay mampiavaka sy ahafantarana an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tao anatin’izany ny sehatry ny kabary , ny vako-drazana… Anisan’ireo tonga teny amin’ny biraon’ny minisitera teny Anosy omaly naneho izany heviny izany ny Fedrasiona’ireo mpikanto ny teny sy soratra (FMTS), ny Gakama… Nasian’izy ireo teny manokana ny fanolorana ilay mari-boninahitra izay tokony hivelatra any amin’ny faritany eo amin’ny tontolon’ny kabary. Ny solotenan’ny Fimpima na fikambanan’ny mpikabary eto Madagasikara, dia nanpi-teny tamin’ny fanafoanana ny fampianaraka kabary any amin’ireo sekolim-panjakana.
Naneho ny alahelony amin’ny fanaovan’ireo haino aman-jery eto an-toerana tsinotsinona ny sangan’asany ireo mpitendry sy mpiangaly valiha. « Zara raha misy mahafantatra noho izany ireo sanganasany nefa dia anisan’ny manandratra an’i Madagasikara any ivelany ny valiha », hoy kosa Donné Andriambaliha. Voatsidika ihany koa ny tokony hametrahana petra-bola ho fanampiana ny mpanao vako-drazana.
Manoloana ireo rehetra ireo, nanamarika ny minisitra Johasy Eleonore fa voaray ny hafatra sy ny hetahetam-pon’ireto mpanakanto ireto ary hapetraka ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra amin’ny fampiroboroboana ny vakoka sy ny kolontsaina Malagasy.